Essay | The World of Pinkgold
You, Me and Feburary!
Posted on February 9, 2009 by cuttiepinkgold
ရှင်ရယ်၊ ကျွန်မရယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီရယ်
မြူ……………………. မနက်ခင်းမှာ မှိုင်းမှုန်ရီဝေတတ်တဲ့ မြူတွေ။ ကျွန်မသိပ်ချစ်တာပေါ့။ ပိန်းပိတ်အောင်မှိုင်းနေတဲ့ မြူတောထဲ တိုးဝင်လမ်းလျှောက်ရတာကို ကျွန်မအတိုင်းမသိ နှစ်သက်မိတယ်လေ။ အဲလိုမျိုး မြူတွေဝေတတ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ မနက်ခင်းတွေ ရောက်လာပြီဆိုရင် ကျွန်မသိပ်ပျော်နေမိသည်။ မနက် မနက်ကို စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ မြူတောထဲ လျှောက်စီးရတာ ကျွန်မအတွက်တော့ လောကီစည်းစိမ်တစ်ခုပါပဲ။ ဟေမာန်က နွေကိုကြိုဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ပြယုဂ်အနေနဲ့ မြူတွေအုံ့ဆိုင်းတာကို သတ်မှတ်တတ်ကြတယ်လေ။ ဒါဆိုရင် မြူတောထဲ လမ်းလျှောက်တာကိုနှစ်သက်တဲ့၊ ဆောင်းရာသီမှာ မွေးဖွားတဲ့ကျွန်မဟာလည်း နွေကိုကြိုဖို့ ဟန်ပြင်နေတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု များလားဟင်။ နွေကိုကြိုဖို့ မွေးဖွားလာခဲ့တာ မဟုတ်ရင်တောင်မှ ကျွန်မဟာ အနည်းဆုံးတော့ ရှင့်ကို ချစ်ဖို့ မွေးဖွားလာတဲ့ လူတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ မြူတွေကြားထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီးလေးနဲ့ လျှောက်သွားနေတုန်းမှာပဲ ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ ရှင့်ကို တွေ့ခဲ့ရတာ ရှင်မှတ်မိအုံးမလား။ အဲဒီ့ဖေဖော်ဝါရီ မနက်ခင်းဟာ ခါတိုင်းနေ့တွေထက် မြူတွေနဲ့ ပိုမှိုင်းနေတာကို ကျွန်မ အမှတ်တရ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ စစတွေ့ချင်းပဲ ကျွန်မရှင့်ကို သတိတရဖြစ်စေမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကြုံခဲ့ရတာပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်မ မှတ်မိသေးတယ်.. အဲဒီတုန်းက မြူတွေ ထူလိုက်ပုံများ ရှေ့တစ်တောင်လောက် အကွာကိုတောင် မနည်းအားစိုက်ပြီး ကြည့်ရတာကိုလေ။ စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကို အားယူပြီးကြည့်ရင်း ၀ုန်း ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ကျွန်မ လူ တစ်ယောက်ကို ၀င်တိုက်မိခဲ့တယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အရှိန်မထိမ်းနိုင်ပဲ ၀ရုန်းသုန်းကားနဲ့ကို လဲကျသွားခဲ့သေးတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မနားကလူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် အထိတ်တလန့်နဲ့ ကြောက်ရွံ့ တတ်တာကို အဲဒီတုန်းကတော့ ရှင် ဘယ်သိအုံးမလဲ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ရှင် ကျွန်မကို အဲဒီတုန်းက ဆူပူခဲ့သေးတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်မ၀င်တိုက်မိတဲ့ အန်တီကြီးက သိပ်တော့ အနာတရ မဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်စက်ဘီးနဲ့ ကိုယ်ပိပြီး တော်တော်အထိနာသွားတယ်။ ရှင်လည်း အနီးတစ်နေရာမှာ ရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ရှင် ပြေးလာပြီး အန်တီကြီးကို လာပြေးထူတာပေါ့။ ကျွန်မကိုတော့ ရှင်က ဆူတယ်လေ။ ဘယ်လိုကောင်မလေးလည်း မသိဘူး.. မြူတွေပိတ်နေတုန်း စက်ဘီးစီးရလားတဲ့။ ကျွန်မမှာတော့ ဟို အန်တီကြီးကို စိုးရိမ်တာရော၊ ကိုယ့်ဒဏ်ရာနဲ့ကိုယ် နာနေတာရော ကြောက်နေတာကြောင့်ရော စကားကို ဟဟ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တော့ ကျွန်မနာကျင်နေတာကို ရှင်သတိပြုမိသွားတယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မကို အားပေးတဲ့ အပြုံးတစ်ခု ရှင်ပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီတုန်းက မြူတွေ ပိတ်နေတာမှန်တယ်။ ရှင့်ရုပ်ရည်ကိုလည်း ကျွန်မ မသဲကွဲတာ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်းတွေကြားထဲမှာ ရှင့်အပြုံးက ဘာကြောင့်လက်နေရတာလဲ။ ဒါ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလား။ ကျွန်မ ရှင့် ရုပ်ရည်ကို လုံးမ၀မမှတ်မိဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှင့် ပြုံးတာကို ကျွန်မ ဘာကြောင့် သတိရနေမိတာလဲဆိုတာတော့ ကျွန်မ မပြောတတ်တော့ပါ။ ဒီလိုအပြုံးလေး တစ်ခုကြောင့်ပဲ ရှင်နဲ့ ကျွန်မ နောက်ထပ်တွေ့ဖို့၊ ရှင့်ကို လုံးဝမှတ်မိဖို့ အခွင့်အရေးများ ကျွန်မ ရရှိလာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်မတို့မြို့ကလေးမှာ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိသည့်အနက် ကျွန်မသည် ဓါတ်တော်ဘုရားကြီး၏ စနေနေ့သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက် တစ်ခုမှာရှိတဲ့ ဓါတ်တော်ဘုရားကြီးဟာ ကျွန်မတို့မြို့ရဲ့ ကြက်သရေဆောင် ဘုရားကြီးဖြစ်သလို ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဟုလည်း ယုံကြည်နေသော ဘုရားကြီးဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားကြီး၏ သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စအ၀၀ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဘုရားပရ၀ုဏ် အစဉ်အမြဲ သန့်ရှင်းနေစေရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့ကို ဂေါပက လူကြီးများက ဦးဆောင်ကာ မြို့ပေါ်ရှိ လူငယ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မလည်း ထိုအဖွဲ့တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကာ စနေနေ့တိုင်း မပျက်မကွက် ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်း သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ သန့်ရှင်းရေးများ လုပ်ပေးရင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီရဲ့ တစ်ခုသော စနေနေ့ တုန်းကပေါ့…………။
Filed under Essay |	7 Comments